Ny safidy tsara indrindra amin'ny tantara foronina momba ny heloka bevava
Famerenana ny tantara momba ny heloka bevava
Ny reny, nataon'i Carmen Mola
Tonga ny fotoanan'ny didim-pitsarana farany ho an'i Carmen Mola. Hanaraka ny lalan'ny fahombiazana ve izy sa handao azy ny mpanara-dia azy rehefa hita ny lohany telo? Na…, ny mifanohitra amin'izany, ny tabataba rehetra ateraky ny fiaviana na tsia amin'ireo mpanoratra telo ao ambadiky ny solon'anarana ao…
All Summers End, nataon'i Beñat Miranda
Nankinin'i Irlandy tamin'ny reniranon'i Golfa ny vanin-taonany afaka mahatratra ireo latitude britanika ireo, toy ny spektrika an-dranomasina hafahafa, miaraka amin'ny maripana mahafinaritra kokoa noho ny faritra hafa ao amin'ilay faritra. Saingy aza hadino fa ity fahavaratra irlandey ity dia manana ny lafiny maizina amin'ireo zava-maitso tsy mety ritra ...
Ny lelafon'i Phocaea, ny Lorenzo Silva
Tonga ny fotoana hamoahana ny fahaiza-mamorona ny mpanoratra. amin'ny soa Lorenzo Silva manome azy hanolotra tantara foronina ara-tantara vaovao, andrana, tantara momba ny heloka bevava ary asa fiaraha-miasa tsy hay hadinoina toy ny tantara nosoratany efatra farany niaraka tamin'i Noemi Trujillo. Saingy tsy maharary ny sitrana...
May ny zava-drehetra, nataon'i Juan Gómez-Jurado
Manatona ny fandoroana ho azy miaraka amin'ny hafanam-pandrefesana ny hafanana alohan'ny fotoana, ity «Mirehitra Rehetra» ity avy amin'i Juan Gómez-Jurado dia tonga mba hanempotra kokoa ny atidohantsika amin'ny iray amin'ireo teti-dratsiny maro. Satria ny zavatra ataon'ity mpanoratra ity dia ny manome ny protagonista iombonana amin'ny tetiny. Tsy misy tsara kokoa amin'ity...
The Plot nataon'i Jean Hanff Korelitz
Fandrobana anaty fandrobana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy te-hilaza aho fa i Jean Hanff Korelitz dia nangalatra tamin'i Joel Dicker ny ampahany amin'ny votoatin'ny fitantarany avy amin'i Harry Quebert izay nangalatra ny fontsika ihany koa. Saingy ny fifanandrifian-javatra tematika dia manana teboka tsara mifanandrify eo amin'ny zava-misy...
Panic nataon'i James Ellroy
Ireo lahatsoratra mba hamahana ny tantaram-piainany na farafaharatsiny ny endriky ny andalan-teny manerana ny tontolon'ny toetra, dia tsara kokoa ny manankina ny raharaha amin'ny mpanoratra tantara iray toy izay amin'ny biographer malaza. Ary tsy misy tsara kokoa noho i James Ellroy mba handika ireo sombin'ny fiainana eo anelanelan'ny jiro sy aloka maro… Momba ny…
The Baby, nataon'i Pablo Rivero
Noforonina tamin'ny fomba fijery vaovao ny olan'ny tambajotra sosialy sy ny hantsana misy azy ireo. Satria tsy ny zava-drehetra dia mety ho lavaka manodidina ny tambajotra sosialy. Raha ny marina, tiako ny hahita ity tontolo misy antsika ankehitriny ity tsy misy whatsapp ratsy hiresahana amin'ny vondrona na…
Ny fofon'ny heloka bevava nataon'i Katarzyna Bonda
Any Polonina miaraka amin'ny fientanam-po ho mpandova noir amin'ny ady mafana na ho sakafo mangatsiaka amin'ny fiandohan'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny fivoahana, feo tahaka ny an'i Katarzyna Bonda (mitovy amin'ny antsika). Dolores Redondo), mipoitra mafy. Ny hamafin'ny mampikorontan-tsaina an'izay sahy mampifandray…
Manomboka amin'ny farany isika, nataon'i Chris Whitaker
Indraindray ny karazana mainty dia mitondra dikany izay mifanitsy amin'ny fisiana. Tranga tahaka ny an'i Víctor del Arbol, afaka amin'ny halalin'ny lalina indrindra amin'ny fandinihana ny toetrany. Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ity mpanoratra ity, Chris Whitacker izay tonga miaraka amin'ny teboka iray hafa mifandray amin'ny…
Rakibolana feno fitiavana an'ny Novel Black, nataon'i Pierre Lemaitre
Ny karazana noir dia iray amin'ireo bastion matanjaka indrindra amin'ny literatiora maoderina. Tantaran'ny heloka bevava na ambanin'ny tany, fanatonana birao maizina izay mifehy ireo tatatra malaza, polisy na mpanao famotorana izay mamela ny hodiny mba hamahana ireo tranga mampikorontana indrindra. Ary Pierre Lemaitre dia iray amin'ireo ...
pejy1 pejy2 ... pejy20 manaraka →